Ubufakazi baleli sonto bumbule izinqe uKoloane – Bayede News
Ufisa ngisho nokubhala incwadi yokuxolisa
by Bayede-News Posted on 12 July 2019 12 August 2019
UMnu uBruce Koloane oseyinxusa eNetherlands
Ufisa ngisho nokubhala incwadi yokuxolisa kulabo ayesebenzisa budedengu amagama abo njengoMnu uZuma
ISIZULU sithi alikho elishona lingenazindaba zalo. Kuleli sonto udaba obelusematheni kwiKhomishini ephenya ngezinsolo zokugwamandwa kombuso bekungolokuhlala kwendiza eyayipepenyekisa izimenywa zomndeni wakwaGupta ezazize emshadweni eNingizimu Afrika. Kusuka kwenzeka lesi siga ngoMbasa wezi-2013 iminwe yonke ibikhomba owayenguMengameli uMnu uJacob Zuma ngokuba nesandla kulokhu. Ubufakazi baleli sonto buphenye izinqe owayeyiNhloko yokubhekelela ukusebenza kwansuku zonke kwezinhlelo zezokuphepha kuHulumeni uMnu uBruce Koloane ngokuthi nguyena owayesebenzisa amagama ezikhulu. Ebufakazini bakhe ubekugcizelela ukuthi usamile ekutheni akukho lapho ake aveza khona ukuthi ungaphansi kwengcindezi kaZuma ukuze avumele ukuhlala kwendiza eyayithwele izimenywa zakwaGupta esikhumulweni sezindiza iWaterkloof Air Force Base, ePitoli.
UKoloane uveze lokhu ngosuku lokuqala ngesikhathi ethula ubufakazi phambi kweKhomishini ephenya ngezinsolo zokugwamandwa kombuso. Udaba lokuhlala kwendiza yakwaGupta kulesi sikhumulo ngowezi-2013 lungundabamlonyeni kule Khomishini.
Okugqamile ebufakazini bangeledlule wukuthi bonke ofakazi bavikela iso labo kodwa akekho ofaka uZuma noveza iqhaza lakhe.
Nakuba uKoloane oyiNxusa lakuleli eNetherlands kubukeka kunguye owayehlanganisa uhlelo lonke lokuhlala kwendiza yakwaGupta eWaterkloof, kodwa uveze ukuthi wayengenawo amandla okujuba aboMnyango Wezokuvikela ukuba banikeze imvume yalokho.
Ohola ubufakazi u-Adv uThandi Norman ufunde ingxenye yesitatimende esifungelwe sesisebenzi sezokuvikela esifaka uKoloane kulolu daba. UKoloane nakuba ekuphika okuningi okwenzeka ngoba uthi sekuyiminyaka eminingi edlule, kokunye ubuye athi akayikhumbuli yonke imininingwane yokwenzeka khona lapho abuye aveze ukuthi akanikwanga isikhathi esanele sokuzilungiselela ukuvela phambi kwale Khomishini.
UKoloane utshele iKhomishini ukuthi wezwa okokuqala ngesicelo sokuhlala kwendiza yakwaGupta eWaterkloof kwakungesikhathi iNxusa lase-India lishaya ucingo likhala ngokuthi isicelo sithatha isikhathi eside ukucutshungulwa. Uthi wafonela iphoyisa elinguWarrant Officer eMnyangweni Wezokuvikela ngalolu daba.
“Okwami kwakungukuthi kuyena, ngiyacela ungakwazi ukwenza isiqiniseko sokuthi uphuthumisa isicelo sokuhlala kwendiza esisithole emaHhovisi Enxusa lase-India. Namanje ngifuna ukuligcizelela iphuzu lokuthi ukucubungula isicelo.” UKoloane umile kwelokuthi akakaze akhiphe umyalelo wokuvumela ukuhlala kwendiza yakwaGupta.
“Angikaze ngikhiphe nowodwa umyalelo ngoba ngangazi kahle ukuthi amandla ami ahamba agcinephi, yayingekho indlela enganginganika ngayo umyalelo isikhulu sakomunye umnyango.”
Uthe kungenzeka ukuthi kwaba nokuphambana kwenkulumo okwaholela kulesi simo. Uthe incwadi eyabhalwa umsizi wakhe owayenguNobhala eHhovisi lakhe ethi nguyena owagunyaza ukuhlala kwendiza yakwaGupta eWaterkloof Air Force Base yayinokuphambana.
Ucelwe ukuba afunde umyalezo owathunyelwa umsizi wakhe kwaboMnyango Wezokuxhumana Namazwe Angaphandle owawuya kuMqondisi Womnyango. “Ngokwenkulumo yakho neNxusa uKoloane, mayelana nokulungiswa kwamaphepha okuhlala kwendiza eWaterkloof, ngicela uqaphele ukuthi uKoloane usiphumelelisile isicelo ngocingo.”
Wabuzwa ukuthi yisiphi leso sicelo okukhulunywa ngaso. “Ngiyaphinda njengoba ngishilo, engakuphasisa ukuthi balandele udaba ukwenza isiqiniseko sokuthi isicelo sonke siyacutshungulwa. Akumina engahlanganisa umyalezo owathunyelwa nge-imeyili, Uthe ufisa ukubhala incwadi yokuxolisa kowayenguMengameli uZuma, owayenguNgqongqoshe Wezokuthutha uMnu uBen Martins, noWezokuvikela uNkk uNosiviwe Mapisa-Nqakula ngoba wasebenzisa budedengu amagama abo ngesikhathi kwenziwa isicelo.
UKoloane uvumile ukuthi wasebenzisa budedengu amandla ehhovisi lakhe ngesikhathi efaka ingcindezi ezikhulwini eziphezulu ukuba zilungise udaba lokuhlala kwendiza endaweni ekhethekile. Ubufakazi bakhe bangoLwesibili bebehlukile kobangoMsombuluko lapho eveze khona ukuthi wacela izikhulu ehhovisi lakhe ukuba zilungise isicelo seNxusa lase-India sokuhlala kwendiza eWaterkloof. UKoloane ucelwe ukuba aphendule ngezinsolo ezabekwa okwabe kungamacala amathathu ethulwa esithangamini esiqondisa ubugwegwe eMnyangweni Wezokuxhumana Namazwe Angaphandle emveni kwenyanga kuhlale ibhanoyi eWaterkloof ngoMbasa wezi-2013. Ngaleso sikhathi wawavuma amacala okusebenzisa budedengu imigudu yezokuxhumana namazwe amazwe ephambanisa neqiniso.
“Ngawavuma amacala obudedengu ekuphathweni komsebenzi nokusebenzisa amandla ukujika imiqondo yabasebenzi, kodwa angizange ngiwavume amanye amacala njengokuthi isicelo sokuhlala kwendiza sagunyazwa yimi ocingweni,” kusho uKoloane oveze ukuthi wavuma ukuthi kukhona lapho laxhoshwa khona libhekile.
Enkulumweni eqoshiwe phakathi kukaKoloane nezikhulu eziphezulu kwezokuphepha okwakukhona kuzo nowayebhekele ukuhlalisa izindiza uThabo Ntshisi, uKoloane uyezwakala ethi uNgqongqopshe Wezokuthutha uMartins noWezokuvikela uNkk uMapisa-Nqakula bayazi ngaleli bhanoyi. Kuleyo nkulumo kubalwa negama lika “Number One”, okungowayengumengameli uZuma.
“Ngakuveza ukuthi akukho lapho uNgqongqoshe Wezokuthutha, oWezokuvikela okanye uMengameli uqobo bakhuluma nami siqu sabo noma bethumela abathile emahhovisi abo. Ngasebenzisa budedengu amandla ehhovisi lami ngokunxusa abasebenzi ukuba basebenze isicelo sokuhlala kwendiza ngibafaka nengcindezi. Akukho lapho ngangilawula khona izinhlaka zokuxhumana namazwe angaphandle,” kuchaza uKoloane. “Ngasebenzisa ihhovisi lami ukulandelela ukuthi kungani isicelo sokuhlala kwendiza sasingacutshungulwa. Ngiyavuma ukuthi engakwenza ngukusebenzisa budedengu ihhovisi lami.”
UKoloane utshele iKhomishini ukuthi wayefuna ukuba muhle kwiNxusa lase-India yingakho ayefaka ingcindezi kwabezombutho wezokuvikela ukuthi bagunyaze ukuhlala kwendiza. Lokhu ukuveze emuva kokuxolisa ngokusebenzisa amagama abaholi abaphezulu okuhlanganisa nowayenguMengameli uZuma. UMehluleli uZondo umbuze ukuthi kwakungolwani ufefe olungaka ikakhulukazi kuNxusa lase-India.
“I-India njengelungu elibalulekile leBrics, ngezwa nginentshisekelo yokusiza ngakhe nobudlelwano obungahamba isikhathi eside. Lesi kwakuyisizathu esibalulekile esenza ngaziveza kuyena njengendoda ethembekile eyayingenza izinto zenzeke.”
Ubekugcizelela ukuthi akukho akuzuza ngokungenelela kwakhe, athi namuhla uyazisola ngakho. Uyavuma ukuthi njengeNxusa laseNetherlands, wakwazi ukuhlela imihlangano yebhizinisi nabakwaGupta kuleliya lizwe waphinda wethula nosomabhizinisi emalungwini omndeni.
Posted in Ikhomishini, Ipolitiki